En vente actuellement 25/10/2018
Archive du 25/10/2018
Hoditra akondro, azo itsaboana volo simba …
Ny otrikaina ao anatin’ny akondro dia manatsara ny volo. Ny singa ao anaty hoditra akondro kosa indray, dia manamafy ny volo ary mahamandina sy mampangirana azy. Raha simba ny volonao dia ampiasao ity maska vita amin’ny hoditra akondro ity mba hitsabo ny volonao sy hampangirana azy indray.
Miha-matavy rehefa mafana ny andro : Sao fiandronan-drano ?
Mora mahazo aina ny vehivavy, raha vao mafana ny andro. Mety ho isan’ny mahatonga izany ny « rétention d’eau », na ny fiandronan’ny rano ao anatin’ny vatana. Ara-dalàna ihany izy io, saingy mila fitandremana.
Fomba fihaingoan’ireo vadina filoham-pirenena… samy manana ny hanitra ho azy
Noho ny toerana misy azy dia tsy manan-jo hanao ambanin-javatra ny fomba fitafiny mihitsy ireo « première dame ».
“Mange tout” atao salady amin’ny nofon-kena, na frezy
Maro karazana ny fomba azo hikarakarana sy handrosoana ny “mange tout”. Mitondra otrikaina betsaka ho an’ny vatana rahateo izy ireny.
Ny atao, raha tsy te hisy mony intsony !
Ny sokajin-tarehy be menaka no tena tian’ny mony. Tsy midika anefa izany fa tsy maintsy hisy mony mandrakizay ny olona manana io sokajin-koditra io. Azo atao tsara ny manafoana ny fipoiran’ny mony. Amin’ny alalan’ny fanovana ny fahazarana sy ny fahaizana mikarakara ilay hoditra no tena fototr’izany.Tsy izay ihany, fa mila arahi-maso tsara koa ny sakafo hanina sy ampidirina ao anaty vatana. Raha voahajanao ireo, dia hanao veloma ny mony ianao ….
Vehivavy voan’ny homiadan’ny nono, fantatra noho ny fihetsiky ny saka
Vehivavy tera-tany anglisy, miompy saka ao an-trano no nanamafy fa ity biby ity no nanavotra azy. Tsy dia tia manatona olona loatra mantsy ilay sakany, izay antsoiny hoe Missy.
Tsy maintsy hiditra hampitovy ny karaman’ny lehilahy sy ny vehivavy ny frantsay
3 volana no omena ireo orinasa frantsay mampiasa olona mihoatra ny 50 mba handravonana sy hampitoviana ny karaman’ny lehilahy amin’ny an’ny vehivavy manao asa mitovy.
Lehilahy nitelina fantsika 120
Fantsika miisa 120 no nesorina tao anatin’ny vavon’ity lehilahy tera-tany etiopiana iray. Araka ny fantatra dia nirefy eo amin’ny 10sm teo ho eo ny halavan’ny iray amin’ireo fantsika ireo.
Nisy lehilahy iray izay, efa niaraka tamiko taloha ary efa nisaraka izahay. Mbola te hiverina aminy aho, nefa izy maditra sady manao sipa be.
Raha olona efa fantatra toetra fa tsy matotra sy tia vehivavy toy izany, inona no mbola mahatonga anao te hiaraka aminy ihany ?
Araka ny fandinihan’ny manam-pahaizana momba ny fifandraisan’ny olombelona, dia tsy mitovy ny fomba finamanana eo amin’ny lehilahy samy lehilahy sy ny vehivavy samy vehivavy. Ny an’ny lehilahy dia mahitsy, tsy misy ambadika ary mazava.
Sakafo iray karazana = 3 andro …voadio ny taova, mitsonika ny tavy
Mety hahatonga ny tavy hiandrona ao anaty ny fahalotoan’ny taova. Avy amin’izany no nahatonga ny manampahaizana nihevitra fa manampy amin’ny fampihenam-batana ny fanadiovana ny taova ao anaty na “detox”. Vahaolana amin’izany ny fanaovana “monodiète” na ilay karazana fampihenam-batana amin’ny alalan’ny fihinanana sakafo tokana.
Ari Nao Namoaka hira vaovao “Vazah’Gasy” koa
Vao roa taona monja i Ari Liarinandrasana na Ari Nao dia efa niala teto an-tanindrazana. Tsy mandalo matetika aty Madagasikara izy ary fotoana fohy fotsiny no hijanonany rehefa tonga eto ny tenany. Na izany aza, miampita sy efa ren’ny maro kosa ny sangan’asany, any anaty tambazotra sosialy sy aterineto any.
Tambavy amin’ny « cumin » : Manala tavy haingana be
Hanitra manala ny menaka ratsy sy ny tavy amin’ny vatana ny “cumin”. Indro ny fikarakarana izany, ho tohin’ilay fandaharana “Taiza Vatana”, tao amin’ny Top Radio omaly.